Okraina : Demôkrasia Mitovy Amin’ny Hafa Ve ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2015 5:09 GMT
« Miady ho an'ny fandriampahaleman'ny tanibe Eorôpeana manontolo izahay ». Toy izany no nilazan'ny filoha Okraniana, Petro Porochenko, ny volana Aogositra lasa teo, ny ady ataon'ny miaramilam-panjakana amin'ireo mpisintaka mpomba an'i Rosia, tohanan'ny Maosko ara-miaramila sy ara-bola. Mety ho sangany demôkratika tena mandroso indrindra any amin'ny faritra Atsinanana ilay demôkrasia tanora kely « teraka » teny amin'ny fefin'ny Maïdan. Demôkrasia manana fiseho tsy dia mahazatra loatra ary toetoetra tsy dia misetrasetra indrindra.
Tsy nilamina hatrany akory ny làlana hidirana amin'ny demôkrasia. Ampahefatry ny taonjato iray aty aorian'ny naharava ny Firaisana Sôvietika, mizara ho vondrona telo ireo repoblika fahinin'i URSS : ireo nahatojo ny demôkrasia (ireo izay efa nanjohy ny Fiombonambe Eorôpeana), ireo fitondràna jadona ary ny eo anelanelan'izy roa, izay afaka antsointiska hoe demôkrasia tsy tomombana loatra. Tafiditra ao anatin'io sary farany io i Okraina, fa tsy hoe nanomboka ny taona 2014 fotsiny, sy hoe tamin'ny fialàna tampok'ilay filoha tamin'izany : Viktor Ianoukovitch. “Hita ao anatin'ny tantara politika Okrainiana daholo ny zavatra rehetra afa-tsy ny fandanjalanjàna ny tsara sy ny ratsy”. Natao tao anatin'ny ara-dalàna ny lalao demôkratika nisy fifidianana hatramin'ny 1991, naha-nahaleo tena ny firenena, tsy nisy fitarainana fanonganam-panjakana na fandrombahana fitondrana nataon'ny miaramila.
Tena nanova tanteraka ny fandehan-javatra eo amin'ny lafiny demôkrasia ve ny fahalanian'i Petro Porochenko sy ny fananganana governemanta iray mpiandany amin'ny tandrefana ? Sarotra ihany ny valiny, satria raha miompana kokoa any amin'ny fanajana ny lalàna sy ny ady amin'ny kolikoly ny kabary, miady aminà tendrombohitra iray kosa ilay governemanta vaovao. Mila fotoana ny manova fahazarana sy manova fomba fisainana, ary mbola tsy dia ahitam-bokatra ny ady amin'ny kolikoly. Tsara eo amin'ireo vahoaka sy ireo diplaomaty tandrefana ilay kabary, fa amin'ny fotony, tsy niova ny demôkrasia Okrainiana. Nisy fiovam-pitondrana lehibe fotsiny niaraka tamin'ilay fialàn'ny filoha Ianoukovitch tany Rosia.
Marika izany fa tsy fitondrana sahala amin'ireo hafa ny ao Okraina, ny firafitry ny governemantany. Nandritra ny fanovàna ny governemanta ny Desambra 2014, nahazo vaovao lehibe nahazendana azy tamin'ny fahitàna tamin'ny fahitalavitrany minisitra telo vaovao tsy Okraniana ireo Okraniana. Ilay olo-malaza tena nitàna ny mason'ny maro dia ilay Amerikàna, teraka Okraniana, Natalia Iaresko, voatendry ho minisitry ny fitantanam-bola, taorian'ny nanefàny ny ampahan'ny asany teo amin'ny departemantam-panjakana. Amerikana eo amin'ny lohan'ny kaontim-panjakana, sahala amin'ny endrika maneho amin'ireo rehetra mpanohitra ny fitondrana vaovao hoe tena miasa ao Kiev tokoa ireo fanjakana tandrefana. Ho famenon'ireo ekipan'ny « vahiny » araka ny nanomezan'ireo Okraniana anarana azy, hita tao ilay Litoaniana mpilalao basikety fahiny, Aïvaras Arbomavitchou, voatendry ho ao amin'ny Toekarena ary Sandro Kvitachvili, minisitry ny Fahasalamana sy ny Asa Zeorziana teo aloha, izay lasa mitantana ny Fahasalamam-bahoaka. Natao haingana ilay lalàna fanomezana ny maha-olom-pirenena, fa vitsy ihany ireo firenena eto an-tany hoe eken'ny vahoaka ny fanendrena sahala amin'izany. Matetika no loharanon'ny fifandirana maherisetra ny hoe tantanan'ireo « vahiny »…
Raha toa ka afaka natao ny fanendrena toy izany, antony roa no nahatonga izany. Ny voalohany antsoina hoe Petro Porochenko. Olon'ny raharaham-barotra kokoa noho ny hoe mpanao politika ny filoha amperin'asa (iray amin'ny mpanankarena indrindra ao amin'ny firenena izy ary nomena ny solonanarana hoe « ny mpanjakan'ny sôkôlà »). Eny, tao amin'ny governemanta roa teo aloha izy, fa ny kolontsainy dia ny an'ny kolontsainan'ny orinasa izay tsy dia ilàna loatra ny mijery ny hevitra politika sy ny zom-pirenena. Ny asa vita ihany no ifampitsaràna. Ary ny fanarenana ny fitantanam-bolam-panjakana no vokatra tadiavina (na teo aza ilay ady ao Atsinanan'i Okraina) ary ady mahomby amin'izay amin'ny kolikoly. Manazava ny fisian'ireo « vahiny » telo ao anatin'ireo ministera fototra lehibe izany tanjona izany.
Efa natomboka izany ny ady amin'ny kolikoly. Tena sarotra io satria efa lalim-paka tokoa ilay aretina ao amin'ity firenena ity izay tsy niraharaha izany hatry ny vanim-potoana sôvietika. Nosokafana ny birao miady amin'ny kolikoly ary lasibatr'ireo manampahefana ireo mpiasam-panjakana efa zatra mpanao izany, fa fomba entina ametrahana toerana marina eo amin'ny sehatra politika ihany koa io ady atao amin'ny kolikoly io. Amin'ny fanapotehana ny lazan'ny mpifaninana aminao ary amin'ny fiampangàna azy ho manao kolikoly, miorina sy mirodana haingana ny momba sy ny ho avinao eo amin'io sehatra io. Ireo olona tamin'ny fitondrana teo aloha no tena iantefan'izany. Ao anatin'izy ireo, ny minisitra taloha nisahana ny Vola Miditra, Alexandre Klymenko, izay nametraka fepetra iadiana amin'ny kolikoly ihany koa. Ampangain'ny governemanta vaovao ho nanankarena nohon'ny fomba ratsy, nandresy tamin'ireo fitoriana azy rehetra anefa ilay tomponandraikitra politika teo aloha, fa miaina manao sesintany ankolaka any Rosia. Mahatsapa ny zavatra mitranga ankehitriny, miantso ny fampihavanana i Klymenko ao amin'ny vohikalany, ary miseho amin'ireo lahatsary izay anindrahindràny ny fampihavanana eo amin'ireo samy Okraniana .
Fampihavanana izay tian'ny Praiminisitry ny Ianoukovith teo aloha, Nikolaï Azarov, hoararaotina ihany koa. Niala tampoka tao Kiev tamin'ny fotoana nampilentika ilay fitondrana, iray amin'ireo olona tena be mpankahala indrindra any Andrefan'i Okraina, miaina mialokaloka any Rosia, saingy mbola manonofinofy ny hiverina any amin'ny firenena. Eo am-piandrasana izany aloha, tsy misalasala ny mandefa fanehoankevitra manimba mikasika ilay fihetsiketsehana politika izay arahany avy lavitra ilay Praiminisitra teo aloha. Manome ny heviny amin'ilay fitsapàna hevitra mandahatra ireo mpanao politika malaza indrindra, nilaza i Azarov fa « tsy ho afaka ny hahazo vokatra tsara mihitsy i Okraina raha tantanan'ireo mpanao politika afaka mirotsaka amin'izao fotoana izao ho amin'ny toeran'ny filoham-pirenena ». Tena tsy nisy ohatra izany ireo tsoakeviny momba ny andraikitr'i Petro Porochenko sy Ioulia Timochenko : « efa nasehon'ny asa vitany teo amin'ny fitondrana fa mahavita manao tantely afa-drakotra tanteraka ny firenena izy ireo, amin'ny fanafaingànana ny fahafatesany ».
Anarana Okrainiana fanta-daza indrindra any ivelany, efa aloky ny lazany fahiny sisa i Ioulia Timochenko ankehitriny. Tsy mbola sitrana tsara tamin'ny fahareseny lehibe nandritry ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2014 « Ilay printsy vavin'ny entona », izay nahazoany vato mahery kelin'ny 10 % monja, anefa izy no tena nankalazain'ny media sy endrik'ireo tratry ny tsindry hazo lena tany amin'ny fitsaràna tamin'ny famonjàna azy. Kely ihany ireo fanantenana ny hiverenany ho amin'ny laharana voalohany eo amin'ny sehatra ara-politika, raha mbola mitohy mampiseho ireo fihenjanana maro i Timochenko ary mahatofoka mpifidy maro. Nefa, hita ho firenena tsy mitovy amin'ny rehetra mihitsy izao i Okraina, ary tsy azo tsinontsinoavina mihitsy ny mety hisian'ny fiverenena tampoka.